उपत्यकामा फेरि लकडाउन घोषणा हुनसक्ने ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/उपत्यकामा फेरि लकडाउन घोषणा हुनसक्ने !
काठमाडौं / उपत्यकामा फेरि लकडाउन घोषणा हुनसक्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर र नगरपालिकाका मेयरहरुको संगठन मेयर्स फोरमले कम्तिमा दुई देखि तीन साता लकडाउन गर्न सुझाव दिएको छ । उनीहरुले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सरकारलाई समेत यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेर अनियन्त्रित हुने खतरा बढेसँगै लकडाउनको तयारी भएको बुझिएकाे छ । चीसो बढेसँगै निमोनियाको खतरा देखिएको छ । कोभिड १९ को जोखिम झन् बढेपछि उपत्यकामा त्रास बढेको छ । यूरोपमा चीसो बढेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ ।
अहिले देशको कुल कोरोना संक्रमितमध्ये आधाभन्द बढी काठमाडौं उपत्यकामा देखिनथालेका छन् । उपत्यकाका अस्पतालहरु कोरोना संक्रमितले भरिन थालेका छन् । आइसियू र भेन्टिलेटर भरिएका छन् । कतिपय जोखिममा परेका संक्रमित आइसियू र भेन्टिलेटर नपाएर अस्पताल बाहिर रोकिएर मृत्युवरण गर्न पुगेका घटनाहरु छन् ।
अस्ट्रेलियामा फेसबुकमा समाचार हेर्न तथा सेयर गर्न नपाइने
२ बर्षदेखि चर्चित गायिका इन्दिरा जोशि आफू प्रेममा रहेको खुलासा – को होला इन्दिराको राज कुमार ? हेर्नुहोस तस्बिर सहित।
सामान किन्न गएकी किशोरी ३ दिनदेखि सम्पर्कविहीन, सहयोग गर्दिन सबैमा अपिल